Uhlalutyo lukaGoogle: Ukulandelela iphepha leqela lesithathu Martech Zone
NgoLwesine, Agasti 16, 2007 NgoLwesihlanu, Agasti 17, 2007 Douglas Karr
Usenokuba ufunde ukuba ndithenge iphepha kwi- Isigidi seDollarWiki. Iyaxabisa imali ukunceda ukuqhuba ukugcwala kwindawo yam-ndicinga ukuba eli lithuba elikhulu kwiinkampani ezininzi zokwenza utyalomali oluncinci ngentlawulo enkulu. Enkosi ngokukhethekileyo ku UJohn Chow yokuvuselela umbono!
Ndithengile email Marketing, UkuBhloga ngokuBumbeneyo kwaye I-Web Analytics amaphepha kwaye ufuna ukuqhubeka nokwandisa umxholo ukuze ube sisibonelelo esibanzi kuyo nantoni na enokwenza nokuThengisa nge-imeyile kunye nokuBhloga ngokuBumbeneyo ngokulandelelana. Ngotyalo-mali lweedola ezilikhulu, ayisiyonyani ukuba iWiki iyaqhubeka nokukhula ekuthandeni.
Umbuzo oyinyani kukuba uza kubonwa njengomthombo othembekileyo okanye hayi! Ukuba ayisiyiyo, abantu abazukuyisebenzisa- kwaye iya kusilela ukubuyela kwityala lam. Ndiyakholelwa ukuba kufanelekile ukungcakaza nangona-ngakumbi ukuba ndingayiphumelela loo nto I-LCD uJohn anayo kukhuphiswano lwakhe! 🙂
Ukuze 'ndibukele utyalo-mali lwam', ndifuna ukukwazi ukulandelela ukuba bangaphi abantu abaya kutyelela iphepha le-wiki. Ngombulelo, abantu abakwiMillionDollarWiki bavumela abantu ukuba babethelele amanye amaphepha ngaphakathi kwiphepha labo besebenzisa izakhelo. I-Wiki syntax imi ngolu hlobo lulandelayo:
Indawo yewebhu = http: //www.yourwebsite.com/your.html
ukuphakama = 100
ububanzi = 100
umda = 0
skrola = hayi
> / iwebhusayithiFrame>
Ke, ukulandelela iphepha kulula kakhulu. Ndongeze iphepha ku eyam indawo enekhowudi yam yokulandela umkhondo kuGoogle kuyo. Ndalichaza elo phepha kwisakhelo sewebhusayithi kwaye ndacwangcisa ukuphakama nobubanzi kuzo zombini ukuya ku-1.
Indawo yewebhu = https: //martech.zone/mytrackingpage.html
ukuphakama = 1
ububanzi = 1
Qho xa umntu etyelela iphepha le-wiki, liza kubonakala kwiGoogle Analytics. Ukuqinisekisa ukuba ndiyakwazi ukuyilandela ngokuzimeleyo, ndongeze ipharamitha kwikhowudi yam yokuHlaziya ukulandela iphepha leWiki. Le yikhowudi kwi-mytrackingpage.html: